Senior Citizen Nhare neInternet Zvishandiso Chokwadi, Zviverengero, uye Statistics | Martech Zone
Mufungo uyo vatana vasingakwanise kushandisa, vasinganzwisise, kana vasingadi kushandisa nguva online wakapararira munharaunda yedu. Nekudaro, iko kwakavakirwa pane chokwadi? Ichokwadi kuti Millennials inotonga kushandiswa kweInternet, asi zviripo here izvo zvirinani zveVacheche Boomers pawebhu pasirese?
Hatifunge kudaro uye isu tave kuda kuzviratidza. Vakwegura vari kugamuchira uye kushandisa matekinoroji emazuva ano mukuwedzera huwandu mazuva ano. Ivo vari kuona iwo mabhenefiti ekudzidza mashandisiro ekushandisa malaptop, mafoni, uye kunyangwe dab muchokwadi chaicho.
Heano mamwe echokwadi ayo anokuratidza iwo chaiwo mashandisiro anoita mazera akura munharaunda yanhasi kushandisa Indaneti.
Vangani uye Zvakawanda Sei
Huwandu hwevakuru paInternet hwanyanya chaizvo. Sezvinei, vangangoita 70% yevanhu vane makore 65 uye pamusoro vanoshandisa imwe nguva online zuva nezuva.
Paavhareji, chizvarwa chekare chinoshandisa kutenderera maawa makumi maviri nemanomwe online pasvondo.
Wdcdc.ca Vakwegura & Pasi Pose Webhu
Zvakare, vakuru vakaziva kubatsirwa kukuru kweInternet - kuwana mahara ruzivo rwusingagumi! Naizvozvo, tsvagiridzo inoratidza izvo zvirinani 82% yevakuru vanoshandisa injini dzekutsvaga kuwana ruzivo pamisoro yezvavanofarira.
Vazhinji Vakwegura Tarisa Mamiriro ekunze
Chimwe chezvikonzero chikuru nei vanhu vakuru vachienda pamhepo kutarisa mamiriro ekunze (dzakatenderedza 66%). Icho chinhu chinozivikanwa chekuti mukuru iwe unowana zvakanyanya kunetseka iwe unozoita nekukurumidza shanduko mune mamiriro ekunze, saka kuitarisa pamhepo inzira huru yekugara wakagadzirira.
Nekudaro, vanhu vakura vanoshandisa iyo Internet kune imwe nzvimbo yezvimwe zvinhu zvakare. Zvimwe zvezvinhu zvakajairika zvinosanganisira kutenga, ruzivo nezve chikafu, mitambo, makuponi uye zvidzikiso, uye zvimwe zvikonzero zvakawanda.
Vakwegura Vanotaurirana Vano paInternet?
Chimwe chirevo chatinacho nezvevanhu vakuru vakatikomberedza ndechekuti vachiri kuvimba nenhare dzenhare kuti vataure neshamwari dzavo nemhuri. Kunyange ichokwadi kune vamwe, haina kunge yakapararira sekufunga kunoita vamwe.
Idzi nzira nhatu huru dzekutaurirana paInternet ndeemaimeri, mameseji maapplication, uye mapuratifomu enhau. Vanotenderedza 75% yevanhu vakura vanotaurirana nenhengo dzemhuri yavo vachishandisa imwecheteyo mameseji app. Iwo maviri akajairika ndeaya FaceTime uye Skype sezvo izvi zvinoita kuti zvive nyore kwazvo kutaurirana nevhidhiyo uye kutumira mifananidzo.
Ndeapi Midziyo Anonyanya Kushandiswa?
Kunyangwe isu tafamba nzira refu mukuunza vakwegura uye tekinoroji padhuze pamwechete, pachine mukana wekuvandudza. Semuenzaniso, nharembozha dzese dzinowanzo kuve dzakajairika pakati pezvizvarwa zvekare zvichienzaniswa nema smartphones. Iyo yepamusoro iwe yaunosvika pazera rezviyero, iyo yakakura iyo mukaha pakati pekushandiswa kwemaserura uye mafoni anova.
Semuenzaniso, 95% yevanhu vane makore 65-69 vanoshandisa nharembozha, nepo 59% vanoshandisa mafoni. Zvisinei, 58% yeavo vane makore ari pamusoro makumi masere vanoshandisa nharembozha, asi chete 80% vanoshandisa mafoni. Zvinotaridza kuti mafoni emafoni achiri kutyisidzira vakwegura, asi aya maitiro achachinja munguva pfupi iri kutevera.
Aya maNhamba Anotarisirwa Kukura Mune Ramangwana
Iwo manhamba ane hukama neInternet uye vakwegura ari kukurudzira zvikuru kare. Nekudaro, ivo vanotarisirwa kukura nekukurumidza munguva pfupi iri kutevera. Sezvo zvizvarwa zvidiki izvo zvatova nemirairo yakanaka yetekinoroji yazvino zvichikwegura, iro chikamu chevakuru vane ruzivo rwehunyanzvi vachakurawo.
Kuti uwane kunyatso nzwisisa pamusoro penyaya iyi, tarisa zvinotevera infographic zvakagadzirwa na Medalerthelp.
Tags: kushandiswa kweinternetnhamba dzenhare mbozhanhare yekushandisavanhu vakuru
Figma: Dhizaini, Prototype, uye Kubatana Across Enterprise